Email: mo.moht@mptmail.net.mm www.myanmartourism.org
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၁၀)ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည့်စုံတိကျမှန်ကန်သော မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပြည်သူလူထု၊ ပုဂ္ဂလိက၊ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား...
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ၀န်ထမ်းမိသားစုများ၏ (၂၅)ကြိမ်မြောက် ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ၀န်ကြီးဌာန၊ ကျောက်စိမ်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးဦးစွာနမောတဿ(၃)ကြိမ် ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခဲ့ကြပြီး ပျဉ်းမနားမြို့၊ ပါဠိတက္ကသိုလ်၊ မင်္ဂလာဇေယျုံ ကျောင်းတိုက်၊ ပါဠိတိုက်အုပ်...
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၁၁) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီစုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုး ပွဲတော်နှင့် လျှိုပိတ်ဆည်အတွင်း ငါးမျိုးသားပေါက် စိုက်ထည့်ပွဲအခမ်းအနားအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ၀န်ကြီးဌာန၊ လျှိုပိတ်ဆည်အနီး၌...
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၁၁)ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကြီးကြပ်မှု၊ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (နေပြည်တော်)၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Supervision Accounting Course...
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၁၁) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှု၊ မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ရှမ်းတောင်ဇုန်) ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ဟိုတယ် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်း (၃) မျိုးအား ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်နေ့ (၀၉း၃၀) နာရီအချိန်တွင် တောင်ကြီးမြို့ Royal Taunggyi Hotel ၌ ကျင်း...
Yangon Mandalay PyinOoLwin Mogok Meikhtila Pyinmana Tharzi Kyauk Sal Ya Mae` Thin Myingyan Pyaw Bwe Sagaing Monywa Kalay Shwe Bo Katha Kanpatlat Naypyitaw Bagan Kyaukpadaung Pakhoku Gangaw Minbu Taung Twin Gyi Magwe Yay Nan Chaung Taungyi Nyaung Shwe (Inle) Pindaya Aungpan Thipaw Kalaw Nam Sam (Loilin) Lashio Tant Yan Muse Kyauk Mae Naung Hkio Ho Pan Myitkyinar Hpa Kant Bamaw Putao Moe Nyin Loikaw Pathein Chaung Tha Ngwe Saung Mawlamyaing Kyaikhto Hpa-an Myawaddy Tha-Htone Sat-Sal Kawthaung Dawei Myeik Bago Taungoo Pyay Tha Yar Waddy Kyaington Tachileik Myauk Oo Sittwe Thandwe (Ngapali) Kyaukphyu
---Inbound Tour ---Outbound Tour
---Chinese ---English ---French ---German ---Italian ---Japanese ---Korean ---Russian ---Spanish ---Thai
Yangon, the capital, also considered as the Garden City of the East" is the gateway to Myanmar. adorned with idyllic lakes, shady parks and green tropical vegetation, Yangon is at once friendly and welcoming. Yangon is alsoagrowing bustling business centre. Yangon not-tobe-missed attraction is the magnificent Shwedagon Pagoda atop Singuttara Hill, considered by many as the greatest and most impressive Buddhist pagoda in Myanmar today ...
In Mandalay, you come closest to the real Myanmar of old. The second largest city of ...
Founded in 849 AD it became the capital of the first unified Kingdom and the first multinational .. read more
Singapore: Singapore isanation of rich heritage, reflected in its food, places of worship and shops. Engage your senses and experience how multiculturalism is celebrated on this little island. Singapore isamelting pot of cultures, with major ethnic groups in the country being the Chinese, Malays, Indians and Eurasians.
Thailand: Probably the most visited and remembered landmark of Thailand, The Grand Palace in Bangkok is where every visitor must payavisit at least once in their lifetime. Aiming to recreate the glory of the former capital city of Ayutthaya .. Read More
Myanmar is Long time ago, old indian had known Myanmar as 'Byama'. The earliest word of Myanmar came out in the area of Bagan especially in Taungoo Ni stone-inscription. In the 15th century, 'Burma' is firstly named by Portuguese who came to trade. Throughout the time of British's colony, English used 'Burma' for Burma ethnicity. Burma is an ethnicity among national races. The word of Myanmar embraces the national races of Kachin, Kayar, Kayin, Chin, Burma, Mon, Rakhine and Shan. It named Myanmar which refer all kinds of race that live together in the Republic of the Union of Myanmar in unity.